‘… अनि सिरकले मुख छोपेर रोएँ’ – Nepali Profile
‘… अनि सिरकले मुख छोपेर रोएँ’
बिशाल अर्याल ३० बैशाख २०७७, 3:23 pm
‘केमा तिम्रो छैन मन बुझेको ?
मलिन मुहार परेली रुजेको ।’
राम्दी पुल तर्ने ।
बाँचे त हुम्ला भेट मरे के गर्ने ?
यो शब्द सर्जक रमेश ‘बिजी’ ले लेखेका हुन् । ‘राम्दी पुल तर्ने’ दोहोरीगीतको टुक्का र अन्तरा हो । पछिल्लो समय ‘राम्दी पुल तर्ने’ गीत निकै चर्चामा छ । ‘राम्दी पुल तर्ने’ एउटा उदाहरणीय रचना मात्रै हो । उनका दर्जनौं गीतहरु चर्चित छन् ।
रमेश ‘बि.जी.’ नाम नौलो र नयाँ होइन, विल्कुलै । सांगीतिक क्षेत्रमा पृथक परिचय छ, उनको–शालिन, भद्र, अनुशासित ।
ठेट शब्दलाई संयोजन गर्न सक्ने अद्भुतकला छ, उनमा । शब्दका थुङ्गालाई कहाँ, कसरी राख्ने कला छ । फूल थुङ्गालाई माला बनाए जसरी शब्दका थुङ्गालाई गीतमा माला बुन्छन्, उनी ।
उनी यथार्थवादी सर्जक हुन् । उनका रचनाहरु विशुद्ध मौलिक हुन्छन् । समाजको यथार्थ चित्र हुन्छ । ‘सुन पानीले छर्का मायालु’ एक ज्वलन्त उदाहरण हो । जातिय र सामाजिक विभेदको विषयमा वकालत गरेको पाइन्छ ।
वरिष्ठ कलाकार पुरुषाेत्तम न्याैपानेसँग सर्जक रमेश बि‍ .जी.
वि.स. २०५४ सालमा रेडियो नेपालबाट औपचारिक संगीतिक यात्रा सुरु गरेका बि.जी. अहिलेका ‘बिजी’ (व्यस्त) र स्थापिक सार्जक हुन् ।
‘लाइछौ बेसन’, ‘दियो कलश’, ‘सररर पानी घट्टामा’, ‘रुन्छ नि मन किन रुदैन’, ‘तिमी र म भए प्यार हुन्छ’, पुर्वैमा झ्याल राखे’, ‘देउरालीमा धजा’, ‘हुदैन सुन पित्तल गालेर’, ‘कस्ति हौली गुन्यू चोलीमा’, ‘तिते करेलीले’, ‘लाछा डोरी ऊनको’, ‘हैन अरुको’ लगायत दर्जनौं गीतहरु चर्चित छन्, उनको ।
अनुजदेखि अग्रज सम्मको मनोविज्ञानलाई बुझेर कलम चलाउन सक्ने क्षमता छ । बालगायिका कमला घिमिरे देखि नारायण रायमाझी र पुरुषोत्तम न्यौपाने सम्मका गायकले उनले लेखेका शब्दमा गीत गाएका छन् । जसका लागि, जसलाई पनि सुहाउने गीत लेख्ने क्षमता छ । उनले लेखेको गीत युट्यूबको करोड क्लबमा प्रायः पर्छन् । करिब पाँच सय गीतमा शब्द लेखेका छन् ।
लोकदोहोरीमा मात्र होइन, सुगम र चलचित्र बिधामा पनि उत्तिकै कलम चलाउन पोख्त छन्, सर्जक बि.जी. । हृदय चन्द्र सिंहं प्रधानको ‘एक चिहान उपन्यास’ लाई नाट्य रुपान्तरण समेत गरेका थिए । साँस्कृतिक संस्थान नाचघरले एक सय भन्दा बढी सो प्रर्दशन गरेका थियो । जुनसुकै काममा पनि असफलता कहिले पनि व्यहार्नु परेन उनले ।
नेपाली चलचित्र गोर्खा पल्टनको ‘सन्नानीले झुक्क्यो मलाई’, परदेशीको ‘भन्थेउ आमा’ उनका सुपरहिट गीत हुन् । गायक रामकृष्ण ढकालको ‘हुरी’ एल्बममा समावेश गीत ‘म हुरीमा दियो जलेको देख्छु’ टाइटल गीत उनैले रचना गरेका हुन् ।
‘म हुरीमा दियो जलेको देख्छु’ २०७३ सालको सुपरहिट गीत हो । ‘म हुरीमा …’ गीतले इमेज म्यूजिक अवार्ड (२०७३) र हिट्स एफ. एम अवार्ड (२०७३) अवार्ड पाएका थिए ।
उनको सिर्जनाहरु प्रायःबियोगान्त हुन्छन् । दुःख, रोदन र बिछोड उनको सिर्जनाको मुख्य फ्रेम (कथा) हो । घरबेशी र परदेशीको सर्जक हो, भन्दा फरक नपर्ला । उनको मान्यता हरेक सिर्जनाले समाज बोक्नुपर्छ । समाजको चित्रण गर्न सक्नुहुनुपर्छ भन्ने छ । उनको लेखनमा दुःख पिडाका भाका मिल्ने हुँदा आनन्द र सन्तुष्टि पाइन्छ ।
लोकदोहोरी गीतमा प्रविधिसँगै केही बिकृति पनि भित्रिएको छ । सर्जकहरु पैसाका लागि त्यो सिर्जना गर्छन्, आफूलाई अमर र कालजयी लेखनमा कमै लेख्छन् । त्यसैले सांगीतिक भीडमा दुई चार पैसा खर्च गर्ने, दुई तीन दिन अनुहार देखाएर हराउनेको लर्को छ ।
सर्जक बि.जी. का अनुसार लोकसंगीत लोकले अनुमोदित गर्ने थलो हो । जहाँ लोकको भावनालाई सिरोपर गर्दै संगीतिक जीवन/यात्रा अगाडी बढाउनु पर्छ । आफूले लेखेका शब्दमा आफै रुने रहस्य खोले उनले । ‘सुन पानीले छर्क मायालु’ र ‘देउरालीमा धजा’ शब्द रचना गर्दा रोए, अनि सिरकले मुख छोपेर रोए–उनले थपे ।
कलाकारितामा सम्भावना र चुनौतिहरु धेरै छन् । चुनौतिलाई अवसरमा सहज र सरल तरिकाले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक असल र सफल कलाकारमा हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
स्वर्गिय राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्वसको अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी दोहोरीगीत प्रतियोेगितामा ह्याट्रिक गरेका उनी, गायक होइन सर्जक अर्थात रचनाकार बने । सर्जक बि.जीले प्रेरणाका स्रोत बरिष्ट गायक नारायण रायमाझी र पुरुषोत्तम न्यौपाने हुन् । जस्ले कलाकारितामा ल्याए । सफल र असल सर्जक बनाए । अनि उनले नाम र दाम दुवै कमाए । एउटा स्थापित सर्जक बने ।
कोरोना कहरका कारण गरिएको लकडाउनले उनी चिन्तित छन् । लोकदोहोरीगीत क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरुको भविष्य के ? भन्ने बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
लकडाउनको मारमा परेका कलाकारहरुका लागि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानका तर्फबाट रचनात्मक र प्रभावकारी भुमिकामा रहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालले कोभिड–१९ आकस्मित सहयोग समिति स्थापना गरेर हजारौं कलाकारहरुलाई राहत बाँढिरहेका छन्
उनी हाल, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्ष हुन् ।